Cat Clinic nso m 2022 na ụlọ ọgwụ Vet kacha mma na United States
By Victoria Akpan TMLT December 17, 2021 Health, Mbido 0 Comments
- ụlọ ọgwụ nwamba nso m 2022 -
Mgbe kitty gị malitere ime ihe na-adịghị mma, atụmanya nke ụlọ ọgwụ nwamba kwesịrị ịbụ ihe mbụ na-abata n'uche. Ee! N'ezie, Ọ na-arịa ọrịa!
Ị na-achọ ụlọ ọgwụ anụmanụ kacha mma na United States? Karịsịa, ndị na-enye nlekọta dị elu maka anụ ụlọ gị? Ozi niile ịchọrọ nọ ebe a!
Aghọtara m ka ndụ anụ ụlọ dị onye ọ bụla mkpa. Yabụ, abịara m ebe a inye “ụdị dị iche iche maka ụlọ ọgwụ vet kacha ukwuu na ụlọ ọgwụ United States nke ahụ nwere ike inye ọgwụgwọ kacha mma maka anụ ụlọ ị hụrụ n'anya."
N'ebe a ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ụlọ ọgwụ pusi kacha mma na mpaghara ahụ nke na-enye ọgwụgwọ anụ ahụ nke ọma na ọnụ ala ma ọ bụ ọbụna n'efu.
Cliniclọ ọgwụ nwamba kacha mma nso m 2022
Location: 7330 W Forest Home Ave, Greenfield, WI 53220
Ụlọ ọgwụ Alta View Veterinary bụ ụlọ ọgwụ na-arụ ọrụ zuru oke. Ụlọ ọgwụ nwamba na-anabata ndị ọrịa chọrọ ọgwụgwọ bụ isi, ịwa ahụ, ma ọ bụ eze. Ndị nwe anụ ụlọ nwere ike nweta ụdị nlekọta na ọrụ niile n'ebe a!
Na mgbakwunye, ụlọ ọgwụ Alta View Veterinary Clinic nwere atụmatụ kacha mma. Ha gụnyere ọmarịcha Onye ọrụ na ndị na-ahụ maka anụmanụ na-enye enyemaka na nlekọta otu onye na gburugburu ebe obibi ọmịiko.
Cliniclọ ọgwụ nwamba dị nso m 2022 na-ekwusikwa ike na ọgwụgwọ mgbochi. Na mkpa nke nri na ndị ọzọ proactive jikoro.
Usoro ọgwụgwọ laser. Nke a bụ ụdị ọgwụgwọ na-eji ọkụ
Asambodo ezi ahụike
X-ray na-eji teknụzụ dijitalụ dị elu
Ule maka ahụike
Na-egbochi Inwe Ọrịa
Nchọpụta nchọpụta na saịtị
Nlekọta nke mgbu
Ilekọta ụmụ nkịta na kittens
Euthanasia na ụlọ ọgwụ
Monday: 8:00 am-5:00 mgbede
Tuzdee: 8:00 am-5:00 mgbede
Wednesday: 8:00 am-5:00 uhuruchi
Tọzdee: 8:00 am-5:00 ehihie
Friday: 8:00 am-5:00 uhuruchi
Saturday: 8:00 am-12:00 mgbede
Location: 1571 E Highway 44 Rapid City, SD, 57703-2218 United States
Dakota Hills Veterinary Clinic ghọtara na anụ ụlọ ọ bụla bụ onye dị mkpa n'ezinụlọ. Ee! Nke ahụ bụ eziokwu!
Ọzọkwa, ha na-enwe obi ụtọ n'inye ọgwụgwọ ọmịiko na nnukwu ọrụ, dị ka ha gosipụtara Fim.
Ọzọkwa, ụlọ ọgwụ nwamba a dị m nso 2022 meghere na 1947. Ha na-enyekwa ọtụtụ ọrụ na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ. AAHA-enwetara bụ otu n'ime atụmatụ ha kachasị elu!
Igwe redio dijitalụ
Nlekọta ụbọchị Doggy
Ịbanye n'ụgbọ mmiri
Mọnde: 7:00 AM - 7:00 PM
Tọzdee: 7:00 ụtụtụ - 7:00 mgbede
Wenezdee: 7:00 AM - 7:00 PM
Fraịdee: 7:00 AM - 7:00 PM
Satọde: 7:00 ụtụtụ - 5:30 mgbede
Sọnde: 7:00 AM - 5:30 PM
Yorkshire Veterinary Hospital – USA
Malite na ugwu ọdịda anyanwụ, anyị chọpụtara na ụlọ ọgwụ a bụ otu ndị nwere ọkwa kacha elu ọkachamara. Ma ha anọwo na-enye ọrụ anụ ụlọ ihe karịrị afọ 30.
Ị maara na ha enwetala ọtụtụ nrite maka ọrụ ha kacha mma? Nke ahụ dị mma!
Cliniclọ ọgwụ nwamba dị nso m 2022 agba mbọ inye anụ ụlọ ọrụ zuru oke. Ndị a gụnyere; nwamba, nkịta, na osisi ụdị dị ka nnụnụ.
Agbanyeghị, nke a nwere ike ịbụ maka mgbochi na njirimara nke nsogbu ahụ ike ma ọ bụ mkpebi nke ihe mberede.
Mgbochi ahịhịa na akọrọ
Ọgwụgwụ nlekọta ndụ
Nlekọta nwamba ndị okenye
Mọnde: 7:00 ụtụtụ - 5:30 pm
Tuzdee: 7:00 ụtụtụ - 5:30 mgbede
Wenezde: 7:00 ụtụtụ - 5:30 mgbede
Tọzdee: 7:00 ụtụtụ - 5:30 mgbede
Fraịde: 7:00 nke ụtụtụ - 5:30 pm
Satọde: 8:00 nke ụtụtụ - 1:00 pm
Ụlọ ọgwụ Animal Neponset
Location: 961 William T. Morrissey Blvd Dorchester, MA 02122
Ụlọ ọgwụ Animal Neponset anọwo na-elekọta ụmụ obere anụmanụ. Ndị a gụnyere: nwamba, nkịta, ferret, oke bekee, na nnụnụ, kemgbe 1991.
N'ihi ya, ha dabeere na Obodo ogbe ndịda nke Boston. Mana ọrụ ha gbasakwara na Milton, Quincy, South Boston, na ala ịta ahịhịa ndị gbara ya gburugburu.
Ọzọkwa, ị nweghị ike inwe obi abụọ na ụlọ ọgwụ nwamba dị nso m 2022 na-enye nlekọta kacha mma. Yana ebe a na-ahụ maka ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ zuru oke.
Otú ọ dị, nke a bụ n'ihi na ha nwere otu egwuregwu dị ụtọ. Na ndị dibia bekee, ndị ọrụ ahụike anụmanụ, na ndị ọrụ nkwado.
Ọzọkwa, iji mee ka nleta ọ bụla dị irè. echekwa, ndị ọrụ anyị na-arụ ọrụ nke ọma technology na ngwá ọrụ nchịkwa.
Ịzụ ahịa mkpọsa
Monday: 7 ụtụtụ ruo 6:30 mgbede
Tuzdee: n'elekere asaa nke ụtụtụ ruo elekere isii nke abalị
Wenezde: n'elekere asaa nke ụtụtụ ruo elekere isii nke abalị
Tọzdee: elekere asaa ruo elekere asatọ
Fraịde: 7 ụtụtụ ruo 6:30 ehihie
Satọde: 7:30 nke ụtụtụ ruo elekere ise nke mgbede
Sọnde: elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere ise
Ụlọ ọgwụ Firefly Veterinary
Location: 164 W 21st Street New York, NY 10011
Ụlọ ọgwụ na-ahụ maka ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ bụ omume enyi nwamba! Yabụ, nke a pụtara na anụ ọhịa anụ ọhịa gị ga-enwe ahụmịhe ahụike. Agbanyeghị, nke a nwere ike dabara na nkasi obi ha yana mkpa nlekọta gị!
Ọzọkwa, ọzụzụ Free egwu ha na-enyere ha aka ịchọpụta obere akara nke nchegbu na nwamba na nkịta. Nakwa na-emeso ha site na obere nchekasị, sprays pheromone, nri mkpali, na ndị ọzọ na-ebelata nchekasị. azum.
N'ụlọ ọgwụ pusi a dị nso m 2022, ha na-enye ọrụ niile anụ ụlọ gị chọrọ. Mụtakwuo maka ọrụ ọ bụla yana ihe kpatara o ji baara anụ ụlọ gị uru ebe a!
Mgbe nke ahụ gasịrị, ị nwere ike ịhazi oge gị na ha iji nweta nlekọta onwe onye maka anụ ụlọ gị!
Ahụike & ule ọrịa
Nlekọta ụlọ ọgwụ
Nlekọta nwa nkịta & nwa ewu
Ụlọ nyocha & ụlọ ahịa ọgwụ
Asambodo ahụike njem
Nlekọta ihe mberede
Mọnde: 8:30 ụtụtụ - 7:00 pm
Tuzdee: 8:30 ụtụtụ - 7:00 mgbede
Wenezde: 8:30 ụtụtụ - 7:00 mgbede
Tọzdee: 8:30 ụtụtụ - 7:00 mgbede
Fraịde: 8:30 nke ụtụtụ - 7:00 pm
Satọde: 9:00 nke ụtụtụ - 3:00 pm
Ụlọ ọgwụ Charles Animal
Location: 11685 Doolittle Drive
The AAHA enwetala ikike ụlọ ọgwụ St. Charles Animal zuru oke. Yabụ, ha nwere ike ịnye ọrụ kacha mma maka pusi gị! Ị maara ihe kpatara ya? Kemgbe 1978, St. Charles Animal Hospital enyela ndị ọkachamara na-ahụ maka ọgwụgwọ anụmanụ.
Agbanyeghị, nke a bụ ijikọ anụmanụ na mpaghara ndịda Maryland. Ndị a gụnyere; ule ịdị mma, ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, nchoputa, ịwa ahụ, ejiji, na ọgwụgwọ ọrịa na mmerụ ahụ.
Ọzọkwa, ụlọ ọgwụ nwamba dị nso m 2022 ghọtara na anụ ụlọ gị karịrị anụ ụlọ. Ọ bụ akụkụ nke gị ezinụlọ! Ma ha raara onwe ha nye inye ha nlekọta dị oke mma nke kwesịrị na nke ị tụrụ anya ya.
Anesthesia & nlekota
Ịwa ahụ TTA
Treadmill n'okpuru mmiri
TTA-2 ịwa ahụ
Ọbá akwụkwọ Pet
Iwu ụlọ ọgwụ
Mọnde: elekere 7 nke ụtụtụ - elekere asaa nke abalị
Tuzdee: elekere 7 nke ụtụtụ - elekere asaa nke abalị
Wenezde: elekere 7 nke ụtụtụ - elekere asaa nke abalị
Tọzdee: elekere 7 nke ụtụtụ - elekere asaa nke abalị
Fraịde: elekere 7 nke ụtụtụ - elekere asaa nke abalị
Satọde: 8 AM - 1 elekere
Location: 1663 Beacon Street, Brookline, MA 02445
Ahụike na ọdịmma nke anụ ụlọ gị bụ ihe kacha mkpa na ụlọ ọgwụ pusi a dị m nso 2022!
Ebe Brookline Veterinarian Center bụ obere ụlọ ọgwụ anụmanụ na-arụ ọrụ zuru oke. Ha raara onwe ha nye inye nlekọta ahụike dị elu, nke zuru oke.
N'ihi nke a, ndị otu ahụike ha zuru oke, nke ndị na-ahụ maka anụ anụ na-edu. bụ ndị raara onwe ha nye. Nke a abụghị naanị ịgwọ anụ ụlọ gị mgbe ọ na-arịa ọrịa. Mana na-enyere gị aka idobe anụ ụlọ gị obi ụtọ na ahụike n'oge ndụ ya niile!
X-ray na saịtị na redio dijitalụ
Ọgwụ mgbochi anụ ụlọ
Ọrụ ụlọ nyocha na saịtị na nyocha
Ule ịdị mma
Nlekọta anụ ụlọ anụ ụlọ
Mọnde: elekere asatọ ruo elekere isii
Tuzdee: elekere asatọ ruo elekere isii
Wenezde: elekere asatọ ruo elekere isii
Tọzdee: elekere asatọ ruo elekere isii
Fraịdee: elekere asatọ ruo elekere isii
Saturdaybọchị Satọde: elekere asatọ nke ụtụtụ ruo elekere isii nke mgbede
Ụlọ ọgwụ Charm City Veterinary
Location: Natty Boh Tower, 3600 O'Donnell Street, Suite 160 Baltimore, MD 21224
Nke a bụ obere ụlọ ọgwụ anụmanụ nke dị na mpaghara Baltimore na-eto eto Brewers Hill.
Ọzọkwa, ndị dọkịta anụmanụ na ndị ọrụ ha ga-arụkọ ọrụ ọnụ dị ka otu iji nye nwamba gị ọgwụgwọ ahụike dị elu nke nwere ọmịiko.
Na mgbakwunye, ha na-enye nhọrọ nke ịhapụ anụ ụlọ gị n'ime ụlọ ụtụtụ maka nlele. Ọbụna nhọrọ maka ịgwọ na iburu anụ ụlọ gị ma emechaa n'ụbọchị.
Agbanyeghị, nke ahụ bụ maka ndị usoro ihe omume ha anaghị ekwe ka ha nọrọ n'oge a kara aka.
N'ihi ya, ụlọ ọgwụ nwamba a dị nso na 2022 na-eme ka ọ bụrụ isi ihe ọ bụghị naanị ịnye nnukwu nlekọta ahụike maka anụ ụlọ gị. Mana ka ịkarịrị atụmanya gị!
Ule nlebara anya
Ụlọ nyocha na saịtị
Mọnde: elekere asatọ ruo 8:6 nke ehihie
Tuzdee: elekere asatọ ruo elekere anọ
Wenezde: elekere asatọ ruo elekere anọ
Tọzdee: 8 ụtụtụ–5:30 ehihie
Fraịde: 8 ụtụtụ ruo 3 ehihie
Saturday, Sunday: Emechiela
Location: 100 North Groesbeck Highway, Ugwu Clemens, MI 48043
Ị na-achọ ndị dọkịta anụ anụ nwamba nwere nchegbu? Ọ bụrụ otú ahụ, lee anya ọzọ! Groesbeck Animal Hospital nọ ebe a maka gị.
Kemgbe 2011, ha na-enye ọrụ nlekọta anụ ụlọ nke mbụ. Ọzọkwa, na-enye nwayọọ na ọmịiko nlekọta anụmanụ maka anụ ụlọ gị.
Ọzọkwa, a na-eme nyocha ọ bụla, ma ọ bụ ịwa ahụ site na nlekọta kachasị maka nwamba ọ bụla! N'ihi ya, ha na-enye nlekọta kwesịrị ekwesị maka anụ ụlọ na-amasị gị na ọnụ ahịa dị ọnụ ala.
Agbanyeghị, ndị na-ahụ maka ọgwụgwọ anụ ụlọ ha na ụlọ ọgwụ pusi a nwere ike ịchọpụta ma gwọọ ọrịa ngwa ngwa o kwere mee. Ịweghachi pusi gị n'ụkwụ ha n'oge na-adịghị anya. Ha na-agbasi mbọ ike inye pusi gị nlekọta ahụike kacha mma dị.
Ịwa ahụ anụmanụ
Nkịta na nlekọta nwamba
Nlekọta anụmanụ mberede
Pet Spaying na Neutering
Ọgwụgwọ Njikwa Flea na Tick
Mọnde: 8:00 ụtụtụ - 8:00 mgbede
Tuzdee: 8:00 nke ụtụtụ - 8:00 pm
Wenezdee: 8:00 nke ụtụtụ - 8:00 pm
Tọzdee: 8:00 ụtụtụ - 8:00 mgbede
Fraịde: 8:00 nke ụtụtụ - 8:00 pm
Satọde: 9:00 nke ụtụtụ - 5:00 pm
Ụlọ ọgwụ Grandview
Location: 1307 Hamilton Regional Rd 8, Winona, NA L8E 5K5
Ilekọta anụ ụlọ, dị ka ọ bụla ọzọ mmekọrịta, nwere ike bụrụ ihe ịma aka. Ndị ọrụ dị njikere inyere gị aka idobe ahụike anụ ụlọ gị. Na ịkwado gị n'oge ihe isi ike!
N'ụlọ ọgwụ pusi a dị m nso 2022, ọ bụghị naanị onye ibe gị ka a ga-elekọta gị mana gị onwe gị!
Ọzọkwa, Professional Ndị dọkịta na ndị ọrụ na-enye ọrụ ọgwụgwọ anụmanụ. Onye na-eche banyere gị na anụ ụlọ gị n'ezie.
Nlekọta Ahụike Anụmanụ
Mọnde: elekere 8 nke ụtụtụ–6 nke mgbede
Tuzdee: elekere 8 nke ụtụtụ–6 nke mgbede
Wenezde: elekere 8 nke ụtụtụ–6 nke mgbede
Tọzdee: elekere 8 nke ụtụtụ–6 mgbede
Friday: 8 am-6 mgbede
Saturday: 8 am-12 mgbede
Ụlọ ọgwụ Animal Maple Orchard
Ọnọdụ: 5620 W. Maple Road. West Bloomfield, MI 48322
N'ụlọ ọgwụ pusi a dị nso m 2022, ọ bụ ebumnuche ha inye nlekọta anụ ụlọ n'ụdị ọ bụla. anụmanụ. Otú ọ dị, ọrụ ha dị ụbọchị asaa n'izu maka nwamba, nkịta, nnụnụ, anụ ufe, na anụ ụlọ n'akpa uwe.
Yabụ, iji gboo mkpa anụ ụlọ gị, ụlọọgwụ a na-eji ọgwụ ọgwụgwọ anụmanụ kacha egbu egbu dị.
Ọzọkwa, ndị dọkịta anụmanụ ha na-agba mbọ ịzọpụta ndụ. Tụkwasị na nke ahụ, ndị na-ahụ maka anụ ọhịa nwere ọtụtụ iri afọ nke ọkachamara. Ma nwee ike ịnye gị na anụ ụlọ gị ọtụtụ ọrụ.
Chiropractic - mmezi
Ụlọ nyocha ụlọ
Akụrụngwa nleba anya nrịanrịa
Ihe ncheta eletrọnịkị na ndekọ ahụike
Ndụmọdụ gbasara omume
Ịbanye anụ ụlọ
Ụlọ ahịa anụ ọhịa n'ịntanetị
Monday: 7 ụtụtụ - 7 mgbede
Tuzdee: elekere asaa ruo elekere asaa
Wenezde: 7 ụtụtụ - 7 mgbede
Tọzdee: 7 ụtụtụ - 7 mgbede
Fraịde: 7 ụtụtụ - 7 mgbede
Satọde: 8 ụtụtụ - 2 ehihie
Ụlọ ọgwụ Veterinary Lake Union
Location: 1222 Republican St. Seattle, WA 98109
Ụlọ ọgwụ Veterinary Lake Union bụ ụlọ ọgwụ nwere ihe ọmụma nke ọma nwere ndị ọrụ ruru eru. Nke ahụ na-enye ọmịiko na nlekọta dị mma maka anụ ụlọ gị.
Ọzọkwa, ndị ọrụ ebe ahụ na-enwe omume enyi na inye aka mgbe niile. A na-atụ aro ka ị gaa na ụlọ ọgwụ nwamba dị nso m 2022! Ọrụ ndị ahịa na nlekọta ha pụtara ìhè!
Ọzọkwa, ị nwere ike ịnweta ndenye ọgwụ anụ ụlọ gị na nri ebugara ya ozugbo n'ụlọ gị.
Ule nke afọ
Nyocha nyocha ụlọ nyocha
Mọnde: 8am - 6pm
Tuzdee: 8 ụtụtụ - 6 elekere
Wenezde: 8 ụtụtụ - 6 elekere
Tọzdee: 8am - 6pm
Fraịde: 8am - 6pm
Satọde: 9am - 3pm
Ụlọ ọgwụ Nova Cat
Location: 3838 Katidral Lane, Arlington, VA 22203
Cliniclọ ọgwụ nwamba a dị m nso 2022 na-eme mbọ niile iji weta ikuku enyi na enyi. Ọzọkwa, ha na-ebuga nlekọta ahụike nwamba kacha mma na Arlington, VA na Washington, DC, ebe ha na-ewu njikọ ndị ahịa ogologo oge.
Ọzọkwa, na Arlington na Fairfax, Virginia, ha bụ naanị nwamba na-ahụ maka anụmanụ omume. Na ndị otu rheir nso nso bụ ndị dibia bekee tozuru oke. Na ndị ọrụ na-akwado ha na-enwe nchegbu maka ahụike nwamba.
Ọzọkwa, ha na-emeso pusi ọ bụla na usoro kachasị ọhụrụ, na-echeta mgbe niile iji nwee ekele maka anụ ụlọ gị. Ị chọrọ ka pusi gị nwee obi ụtọ na ahụike? Ọ bụrụ ee, mgbe ahụ ha ga-enwe obi ụtọ inye aka.
Ico-Ule kwa afọ
Nleta enyi na enyi nwamba
Ozi oge nhọpụta Dermatology & Ụdị
Akụkọ ahụike Feline
I-131 Radioactive Therapy
Mọnde: 7:30 ụtụtụ - 6:00 nke ehihie
Tuzdee: 7:30 ụtụtụ - 6:00 nke ehihie
Wenezde: 7:30 ụtụtụ - 6:00 nke ehihie
Tọzdee: 7:30 ụtụtụ - 6:00 nke ụtụtụ
Fraịde: 7:30 ụtụtụ - 6:00 nke ehihie
Cheap Cat Vet nso m
Ị na-achọ ụlọ ọgwụ vet dị ọnụ ala dị gị nso? Ọ bụrụ ee, yabụ ebe a bụ ndepụta ụfọdụ maka ịhọrọ.
Tracy Veterinary Clinic, CA
Tracy Veterinary Clinic bụ ụlọ ọgwụ anụ ụlọ dị ọnụ ala!
Ọzọkwa, ọ bụ ụlọ ọgwụ anụ ụlọ na-arụ ọrụ zuru oke na Tracy, San Joaquin County, East Alameda County, na mpaghara West Valley gbara ya gburugburu na-enye ọgwụgwọ ahụike maka nwamba na nkịta.
Ụlọ ọgwụ dị ọnụ ala nke Animal Foundation
Ntọala Animal nke Las Vegas bụ ebe a na-akwụ ụgwọ na-adịghị ọnụ ala. Ọzọkwa, ọ malitere na 1978 ma ugbu a ọ bụ otu n'ime ụlọ ọgwụ na-elekọta anụmanụ na-enwe otu saịtị na mba.
N'otu aka ahụ, dị ka ebe obibi nnabata, The Animal Foundation na-anabata anụmanụ niile nọ na mkpa, n'agbanyeghị ọrịa ma ọ bụ merụrụ ha ahụ, dị ka ụlọ ọgwụ ọha. Ha na-enye ihe niile site na nwamba, nkịta na oke bekee na ezì, anụ ọkụkọ, na ụdị anụ ọhịa.
Site n'enyemaka nke obodo, ha nwere ike ịzọpụta anụmanụ ọ bụla dị mma na ọgwụgwọ nke na-abịakwute anyị na nhụjuanya.
Ụlọ ọgwụ anụ ụlọ dị ọnụ ala, Houston, TX
Ewubere ụlọ ọgwụ dị ọnụ ala na ebumnuche inye nlekọta ahụike na ịwa ahụ maka anụ ụlọ. Karịsịa nwamba na nkịta, na ọnụ ala dị ala!
Otú ọ dị, ọtụtụ n'ime nchọpụta ọrịa, ịwa ahụ. Na kwa, a pụrụ imecha usoro ọgwụgwọ na ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọgwụ mberede anụmanụ (AEC) na mpaghara ahụ na-ahụ maka mgbede, izu ụka, na ọnọdụ ezumike.
N'ụlọ ọgwụ pusi dị nso m 2022, a na-akpọ ndị ọkachamara n'ọrịa anụmanụ akwụkwọ ikike maka ikpe siri ike na ọnọdụ chọrọ enyemaka ọkachamara.
Ụlọ ọgwụ ụbọchị anụ ụlọ dị ọnụ ala, Beaufort, SC
Ọ bụrụ na ibi na Beaufort ma ọ bụ mpaghara gbara ya gburugburu. Mgbe ahụ, ị ​​ga-achọta saịtị zuru oke iji chọta dọkịta anụmanụ! Pet Day Clinic nwere ndị na-agwọ ọrịa anụmanụ, na-agwọ ma nwamba na nkịta.
Ọzọkwa, ahụike na ọdịmma anụ ụlọ gị dị ezigbo mkpa. Na ha ga-emerịrị usoro ọ bụla iji nye anụ ụlọ gị nlekọta kacha mma!
Ụlọ ọgwụ pusi a dị nso m 2022, nwere oke ọrụ ụlọ ọgwụ ahụike anụmanụ nke ga-ewere obere ọnọdụ mberede. yana nsogbu ahụike, ịwa ahụ na eze adịghị ngwa ngwa
Ụlọ ọgwụ Emancipet Vet
Emancipet nọ na-achọ ime ka nlekọta ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ dịkwuo ọnụ ma nwee ike ịnweta ndị izugbe ọha!
Otú ọ dị, ha na-arụ ọrụ netwọk mba na-eto eto nke ụlọ ọgwụ dị elu na ọnụ ala. Ọzọkwa, ịlụ ọgụ maka usoro na amụma ọha na eze na-enyere anụ ụlọ na mpaghara ndị na-enweghị nsogbu aka inwe ndụ ka mma.
Ọzọkwa, ha na-enye ọrụ spay/neuter yana Healthy Pet Services. (dị ka nyocha, ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, Microchips, flea/tick preventative, na ndị ọzọ).
Cliniclọ ọgwụ nwamba n'efu na nso m 2022
Lelee ndepụta dị n'okpuru ka ịchọta Free Cat Clinic kacha nso gị:
Hospitallọ ọgwụ anụmanụ Maple Orchard - Michigan Vet Surgery Center
Ịwa ahụ dị elu maka nwamba na nkịta dị, yana TPLO na ọkpụkpụ ọkpụkpụ ịwa.
Nnwale mbụ ha bụ n'efu, a na-ebelatakwa ejiji mbụ ha site na 25%! Ịbanye bụ n'efu n'ụbọchị nke atọ nke izu. Ha na-enye ụdị ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ọhụrụ.
Weta anụ ụlọ gị e kuchiri ọhụrụ maka nlele mbụ n'efu na VCA Animal Hospital. Ahụ ike nke anụ ụlọ gị bụ isi ihe anyị lekwasịrị anya na VCA, anyị na-agba mbọ ịnye ọrụ pụtara ìhè.
Ụlọ ọgwụ a na-enye ụdịdị dị iche iche nke izugbe, ịwa ahụ, na ọkachamara ọgwụgwọ. Ọzọkwa, ha na-agbalị ịnye nlekọta ahụike kacha mma enwere ike.
Otú ọ dị, ndị na-agwọ ọrịa anụmanụ na-emeso nkịta nke ha otu ụzọ ahụ. Na ha na-enye gị ihe ọ bụla obere.
A na-ahụ ụlọ ọgwụ nwamba n'okpuru na Columbia:
Ụlọ ọgwụ nwamba
Ndị ọrụ nọ na Cat Clinic gbalịsiri ike inye nwamba gị nlekọta na ọrụ kacha mma n'ọhịa feline. ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ọgwụ.
Ọzọkwa, ndị otu anyị na-ahụ maka ọmịiko na ọmịiko na akụrụngwa ọgbara ọhụrụ nwere ike zute anụ ụlọ gị niile, gụnyere nyocha nyocha, ịwa ahụ, ọgwụ mgbochi na ịbanye. Mkpa pụrụ iche na nwamba geriatric na-enweta nlekọta pụrụ iche n'aka anyị
Nwamba Naanị ụlọ ọgwụ anụmanụ
Nwamba Naanị Ọgwụ anụmanụ bụ naanị ọla edo Central Ohio Standard Omume enyi nwamba. Ụkpụrụ bụ isi nke ụlọ ọgwụ pusi a dị m nso bụ ịnye ọgwụgwọ feline dị elu na ọgwụgwọ ịwa ahụ n'ime afọ 31 gara aga.
Agbanyeghị, ọtụtụ ndị nwe nwamba, anyị kwenyere, chọrọ nlekọta dị elu maka anụ ụlọ ha.
Na mgbakwunye, ha na-anwa ịhazi ọrụ anyị maka ma ndị ahịa ma ndị ọrịa. Ka anyị na-emekwa onwe anyị n'ụzọ kachasị ọkachamara enwere ike
Ebe nlekọta ahụike Feline dị ọcha
A na-eme ihe niile na Purrfect Care iji mee ka ọnụnọ pusi gị ghara inwe nchekasị dịka enwere ike. Ọzọkwa, ha na-enye Feliway jụụ akwa n'ime ụlọ ha.
Nke a bụ iji dọba n'elu ihe na-ebu nwamba gị na perch n'ime ụlọ ule ọ bụla. Na nke a, pusi gị nwere ike nyochaa ihe eji enyere ndụ aka ole na ole nwamba!
Onye ọ bụla so n'òtù ha raara onwe ya nye inyere nwamba na ndị mmadụ aka. Ha bụ ndị nwe anụ ụlọ n'onwe ha. Yabụ, ha maara ka ọ dị oke mkpa inwe otu ndị na-ahụ maka ọgwụgwọ anụ ụlọ na-akwado n'akụkụ gị.
Upper Arlington Veterinary Hospital dị na 1515 W Lane Ave na Upper Arlington, Ohio. Ọ toro ma gbakwunyere ndị ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ iji mezuo ihe achọrọ nke ya ọrịa.
Ọzọkwa, otu zuru oke nke ndị dọkịta, ndị ọrụ nka na ndị nnọchi anya ọrụ ndị ahịa niile na-echesi ike maka pusi gị. Ọzọkwa, jiri ọmịiko, nkenke, na nlebara anya rụọ ahịa ha.
Ihe ha na-elekwasị anya bụ anụ ụlọ n'ozuzu ya, gụnyere ahụ ya, uche na mkpụrụ obi ya. Ọzọkwa, ha na-eji Eastern Medicine na mgbakwunye na Western Medicine iji nyekwuo nlekọta ọzọ maka anụ ụlọ gị.
Ọzọkwa, ha nwere ụlọ ọrụ ọgwụgwọ anụmanụ dị elu nke teknụzụ. Raara onwe ya nye inye ndị ahịa anyị nlekọta na nkwurịta okwu nke ọma.
Ha na-agwa ma tinye ndị ahịa ha aka iji nyere ha aka ime mkpebi kacha mma maka ha nlekọta anụ ụlọ.
N'ikpeazụ, ha na-enyocha otu akụkụ kachasị mkpa nke anụ ụlọ gị ahụ ike na ọdịmma. Ndị a gụnyere; nyocha anụ ahụ zuru oke ma kwuo maka otu ọ na-eme n'ebe obibi ya.
top Hampton Ụlọ ọgwụ nwamba
Ụlọ ọgwụ Mayer Veterinary
Lafayette Veterinary Center
Ụlọ ọgwụ anụmanụ na obodo
Ụlọ ọgwụ anụmanụ Bekee
Ụlọ ọgwụ Animal Congress
Ogige ọgwụgwọ anụmanụ n'obodo nta
Ụlọ ọgwụ obodo
Bettervet San Francisco, Mobile Veterinary Care
All Animal Mobile Veterinary Clinic
Ụlọ ọgwụ Nob Hill
Ụlọ ọgwụ Hayward Veterinary
San Leandro Good Sameria Veterinary Hospital
Ụlọ ọgwụ Urban Pet
Ụlọ ọgwụ Arguello Pet
Ụlọ ọgwụ Castro Animal Hospital
Ụlọ ọgwụ Irving Pet
San Francisco SPCA Veterinary Hospitallọ Ọgwụ Pacific Heights Campus
Cat Only Clinical Clinic dị nso m
Ọ bụrụ na ịchọrọ naanị ụlọ ọgwụ vet ka ị zere ọgba aghara sitere na anụ ụlọ ndị ọzọ, nke a bụ maka gị!
Ụlọ ọgwụ naanị nwamba, Columbus, OH 43221
Ụkwụ & Ụkwụ
Ọ bụrụ n’ịchọpụta na ụlọọgwụ ndị a agaala n’elu iji meziwanye gị na nleta nwamba gị na ndị dibịa bekee. Mee ka ha mara, ma gwakwa ndị enyi nwamba gị hụrụ n'anya!
Echefula ịhapụ okwu gị. Nke a bụ iji kpalie ụlọọgwụ ndị a imekwu ihe ma nye gị na pusi gị ọrụ ka mma!
Enwere m olileanya na ozi a ga-enyere gị aka ịchọta ụlọ ọgwụ kacha mma maka pusi gị. Yana anụ ụlọ ndị ọzọ. Biko nweere onwe gị ịmasị, ikwu okwu ma kesaa nke a n'etiti ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị.
Tags:Cliniclọ ọgwụ nwamba kacha mma nso m, Cat Clinic Hampton, Cat Only Clinical Clinic dị nso m, Cat vet nso m dị ọnụ ala, Ụlọ ọgwụ obodo, Ụlọ ọgwụ Columbia, Ụlọ ọgwụ nwamba efu na nso m, Ụlọ ọgwụ Nova Cat
Mmanya Isopropyl maka Acne: Ihe Mere I Kwesịrị Iji Zere Iji Ha
Kedu mmanụ dị mkpa maka ọnya ọnya: otu esi eji ha
Mmanụ dị mkpa maka Keratosis Pilaris: Ntụziaka 5 ị nwere ike iji
25 fun Valentines Day echiche ezinụlọ maka dum izu